Malunga nathi - Guangzhou Hongwu Material Technology Co., Ltd.
Iimpawu ezixabisekileyo zentsimbi
Ubungakanani beSilicon Carbide Powder (β-SiC-p)
Abanini be-Guangzhou Hongwu Material Technology Co., Ltd. enegunya lolawulo lwemveliso yophando kunye neelebhu zophuhliso ezine, uvavanyo iziko, ilabhoratri yophando esetyenzisiweyo kunye nesiseko sovavanyo lokuqhuba, ngokukodwa kwi-commercialization uluhlu olubanzi lwee-nanoparticles ezingaphiliyo kunye nezinto ezintsha ze-21st kwinkulungwane ukusukela ngo-2002.
IHongwu ibisoloko ihlola iimarike, ithengisa itekhnoloji yokuyila, kunye nokubonelela izisombululo zokuphumelela sisebenzisa ubuchwephesha bethu be-nanomaterials, ukuzibophelela ekuvuseleleni ukuwa mfutshane ngezinto zemveli.
I-Nanoparticles eyenzelwe wena iya isiba nanda ngakumbi kwintengiso, kwiiHongwu's I-nanoparticles eyenziweyo inokulungiswa kwisicelo ngasinye. Amanqaku angamaHongwu Inokucwangciswa kwakhona ibe ziingubo ze-nanoparticles, i-Shell engundoqo ye-nanocomposites, i-nanomaterials esebenzayo, i-nanoparticles ukusasazeka, i-coloidal okanye ukumiswa.
Into enomdla kukuba, xa izinto eziqhelekileyo zigqithiselwa kwi-nanoscale, isiphumo esikhethekileyo somphezulu, isiphumo sevolumu kunye nefuthe le-quantum ziya kuvela, kunye nokukhanya kwazo, ubushushu, umbane, amandla kazibuthe, oomatshini kunye neepropathi zamachiza ziya kutshintsha kakhulu ngokufanelekileyo. Umzekelo, i-nano yesilivere yamasuntswana aneempawu zokulwa neentsholongwane. igolide ye-nano, i-platinum kunye ne-palladium amasuntswana abonisa ukubanakho okuhle kakhulu. Isinyithi sinokutshintsha imibala xa sikwiinanosize.
Izinto ezintsha, ukusebenza okuphezulu kwee-nanomaterials zisetyenziswa kakhulu kuyo yonke imiba kubandakanya kodwa kungaphelelanga kwiimoto, i-biomedicine, i-elektroniki, itekhnoloji yolwazi, i-petrochemical, iiplastiki, iiseramikhi, ipeyinti, isinyithi, amandla elanga kunye ne-catalysis.
Siyakumema ngokunyanisekileyo ukuba uqhagamshelane nathi ukuze siqhubeke nokufumana ulwazi malunga nenkampani yethu kunye namandla ethu. Ukuba ufuna ukuthenga ii-nanomaterials okanye uxoxe ngeanotechnologies, nceda ungathandabuzi ukunxibelelana nathi.